Exhibition date : 27-Oct-19 to 30-Oct-19 location: ASIA-WORLD EXPO , Hong Kong Booth number: 11P16
site ha na 19-08-05
Mmadụ Bịa ka The Esquire mbianye. Kpamkpam nyochara. N'ịbụ vetted. Ndị a họpụta mmadụ bụ ụzọ kasị mma na-eji ike gị-akwụ ego. Backpacks na-akpa ndị mmadụ. Anyị na-amalite site na iji ha nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na lug gburugburu akwụkwọ na ji ede na dope pensụl ikpe (soft shells naanị, ekele). An ...
Global ịchọ mma akpa & ole Report ọnọde ndị kasị na-emepe emepe ụlọ ọrụ yinye Ọdịdị, ibu ohere, development ọnọdụ nke ahịa. Ọhụrụ na ọnọdụ, revenue analysis, nwere mmepe, na eminent ịchọ mma akpa & ole Industry Player na-nyochaa. Na-omimi analysis ...
Makeup refills si ụdị i maara na ịhụnanya
site ha na 19-06-27
Ọ bụrụ na dị ka anyị, na ị na-riri ahụ gị reusable mmiri kalama na ịzụta gị shopping na a nkọ kwaaji tote bag, ikekwe ọ bụ oge igba ụfọdụ nkwado n'ime ịma mma gị ọchịchị. Makeup bụ a plastic arọ ụlọ ọrụ. Single-use plastic mkpuchi fọrọ nke nta ọ bụla ịchọ mma ngwaahịa na ahịa na ...
Ngosi Ụbọchị: 27th ~ 30th October, 2019 Ebe: AsiaWorld-Expo, Hongkong
Ngosi Ụbọchị: 27th ~ 30th April, 2019 Booth #: 2J01, Ụlọ Nzukọ 2 Ebe: AsiaWorld-Expo, Hongkong